Volavola kely / salantsalany / avo - Pandawill Technology Co., Ltd.
Ao amin'ny Circuits Pandawill, izahay dia mandray an-tanana ny fanontanian'ny PCB amin'ny volavolan-tabilao rehetra, manomboka amin'ny fizaran-tany iray ka hatramin'ny volabe izay omena mandritra ny fotoana voatondro. Tahaka ny fanaonay rehetra, ny ezaka rehetra ataonay dia ny manome antoka fa na inona na inona volavola dia alefa amin'ny tabilao mifaninana indrindra sy amin'ny fandefasana ara-potoana ianao.
Ny fizotry ny famakiana, ny fitanisana ary ny famatsiana PCB farany dia tsy misy tsy itovizany na kely na lehibe ary samy manome lanja ny mpanjifa isika, na izany aza, PCB dia vokatra "toekarena mizana", izay midika fa ny vidiny tena tsara indrindra dia azo tratrarina rehefa eo isika mahay manamboatra ny batch lehibe indrindra azo atao.
Ho an'ny tabilao lehibe kokoa, manolotra safidy izahay amin'ny alàlan'ny fanaterana voalahatra na afaka manampy amin'ny serivisy fitantanana tahiry izahay mba hanomezana ny isan'ny tabilao mifanaraka amin'ny drafitra famokarana isam-bolana. Manolotra fihenam-bidy ihany koa izahay ho an'ireo mpanjifa izay vonona handray tahiry 100% haingana satria mahasoa anay izany, ary hizara izany tombony izany aminao izahay.
Pandawill dia hanolotra vidiny mifototra amin'ny habetsaky ny tabilao isan-taona, fa ny fizarana ny habetsan'ny famokarana ho an'ny volavola amina andiany kely kokoa. Izany dia hiantohana ny tabilao hanana fiainana talantalana lava indrindra.
Faly izahay manome anao amin'ny fomba mety sy malefaka indrindra hamaly ny filanao.